JINGHPAW KASA: လွိုင်မောက်ယာန်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ဒီဇင်ဘာ (၉) တနင်္ဂနွေ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင် တပ်မဟာ (၂) လက်အောက်၊ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၂၅) ဒေသ လွိုင်မောက်ယာန် ကျေးရွာတွင် ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၂၅) မှ မျိုးချစ်ရဲဘော်များနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်တို့ ဒီဇင်ဘာ (၈) ရက်နေ့၌ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်မှ ရှေ့တန်း စခန်းဖြစ်သော လွိုင်မောက်ယာန်သို့ လက်နက်နှင့် ရိက္ခာပို့လာရောက်ပို့ဆောင် သည်ကို ကေအိုင်အေမျိုးချစ်ရဲဘော်မှ ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ တိုက်ပွဲသတင်း အသေးစိတ်ကို မသိရှိရသေးပါ။
There wasabattle again between KIA’s patriotic (25) battalion and Burmese Government troops in Loi Mawk Yan village, which is under KIA (2nd) Brigade area on 8th December according to KIA front-line officer report. KIA (25) battalion resisted to fire Burmese Government troops which is carried weapons and ration. No detail report is coming yet.